दाँतको चित्रण गर्भावस्थाको बखत दाँतको तस्वीर क्रान्टोस्ल्लेस्की जिल्ला सेन्ट पीटर्सबर्ग प्रीमियर दन्त चिकित्साज
किन एक्स-रे दन्तवट
आवश्यक हुन सक्छ
जवाफ दिनु अघि, गर्भावस्थाको क्रममा एक्स-रे दाँत बनाउन सम्भव छ, परिस्थितिहरूको बारेमा कुरा गरौं किन यो निदान घटनालाई किन चाहिन्छ:
तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, एक एक्स-रे दाँत प्राय: प्रभावकारी उपचारको लागि आवश्यक छ। के यो गर्भावस्थाको बेला यो गर्न सम्भव छ वा यो अझै पनि बच्चाको लागि खतरनाक छ? हामी अहिले एक विस्तृत उत्तर दिनेछौं।
एच 2> एच 2> एक्स-रे, यति चिन्तित धक्का छैन, उसको सानो
दायियन गर्वको समयमा गर्न सकिन्छ कि गर्भवतीमा बनाउन सकिन्छ कि छैन, तिनीहरू धेरै फरक छन्। कुनै पनि फोरममा जानुहोस्: त्यहाँ तपाईं अस्पष्ट उत्तरहरू पाउनुहुनेछ। कसैले विश्वास गर्दछ कि यो स्थगित गर्नु राम्रो हुन्छ, र अरुहरुसंग यो तर्कमा खतरनाक छैन। को सही छ, र को छैन? हामी तपाईंलाई पर्खाइ दिईरहेका छैनौं र उत्तर दिईएको छैन कि दाँतको एक्स-रेलाई स्थितिमा गर्न सकिन्छ, किनकि आधुनिक उपकरणहरूको विकिरण न्यूनतम हो। "आधुनिक" शब्दलाई जोड दिइनुपर्दछ, किनकि केहि राज्य क्लिनिकहरूमा, पुरानो उपकरण स्थापना गरिएको छ।
हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईं आधुनिक क्लिनिकमा गर्भावस्थामा एक एक्स-रे दाँत बनाउनुहुन्छ। त्यहाँ इलेक्ट्रोनिक रेडियो संरचना स्थापना हुनेछ, जसले न्यूनतम रूपमा शरीरलाई असर गर्दछ र भ्रूणको लागि कुनै परिणामहरू निम्त्याउँदैन। यस उपकरणको विकिरण फिल्म एक्स-रेको भन्दा करीव 10 गुणा कम छ, यसबाहेक यसले स्थानीयलाई मात्र काम गर्दछ, र त्यसकारण त्यहाँ कुनै खतरा छैन।
आर्गुमेन्टहरू "र सानो गणित
दाँतको समयमा दाँतको बेला दाँतको एक्स-रे बनाउन लगाइसकेका छन् र अध्ययनले फललाई असर गर्दैन भन्ने महसुस गरे। अब माथिको विषयमा विस्तृत रूपमा झर्नुहोस् र किन यो सबैभन्दा जिज्ञासु मानसिकतालाई हानी गर्दैन भनेर वर्णन गर।
महिलाले विशेष गरी उनीहरूको स्वास्थ्यलाई नजिकको व्यवहार गर्नुपर्दछ र सावधानीपूर्वक गर्भावस्थामा धेरै प्रतिबन्धहरू पालना गर्नुपर्दछ, त्यसैले सावधानीपूर्वक तयारी गर्नु आवश्यक छ। यो गर्भावस्थाको बखत दाँतको एक्स-रे जानु पर्दैन भन्ने सल्लाह दिइन्छ: यो असुरक्षित हुन सक्छ।
सबै फाइदा र रालीग्राफी को कमीहरू
डेटल एक्स-रे आन्तरिक दाँतको उच्च-गुणवत्ता छवि प्राप्त गर्ने केही तरिकाहरू मध्ये एक हो। अध्ययन विधि अहिलेसम्म व्यापक रूपमा लागू हुन्छ, डाक्टरहरूसँग अराजकताको न्यूनतम खुराक दिन प्रयास गर्दछ।
सही अध्ययनको साथ, नकरात्मक परिणामहरू न्यूनतम सुरक्षात्मक एजेन्टहरूको प्रयोगको लागि धन्यवाद छन्।
चित्रहरू विस्तृत रूपमा प्राप्त गरिसकेपछि, यसले रोगबली प्रक्रियाको प्रकृतिलाई राम्रोसँग निर्धारण गर्न र उचित उपचार नियुक्त गर्न सम्भव बनाउँदछ। / LI>
ले तपाईंलाई दन्त समस्याहरूको कारण छिटो पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ कि बच्चाको उपकरण उपकरणको समयमा प्रायः उठ्छन्।
अनुसन्धानको कम लागत। / LI> :
एक्स-रे अध्ययन एक द्रुत र जानकारीपूर्ण निदान विधि हो। यसले तपाईंलाई आक्रामक हस्तक्षेपको सहारा बिना वस्तुको आन्तरिक संरचना निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ। अब यो विधि मुख्यतया हड्डी-अडिटिकलर प्रणाली, साथै दन्तचिकित्साको समस्या निदान गर्न प्रयोग गरिन्छ।
गर्भावस्थाको क्रममा दाँतको एक्स-रेको मुख्य नुस्खा बिरामीको विकिरण हो। Ionanizing किरण सैद्धान्तिक रूपमा आमा र भ्रुण को स्वास्थ्य मा एक नकरात्मक प्रभाव हुन सक्छ। लगभग अध्ययनको क्रममा शरीरलाई बचाउन, विशेष सुरक्षात्मक उपकरणहरू लागू हुन्छन्।
भविष्यका आमाहरूका लागि एक्स-रे गर्न सम्भव छ
तरंगदैन किरणहरू। यो अधिक सुरक्षित लामो छालहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ। / LI>
असुरक्षितको डिग्री। उच्च ऊर्जाले बढी हानि पुर्याउँछ।
वर्तमान प्रयोग गरीएको। शक्ति र वर्तमान तीव्रता को उच्च मानहरु अधिक कठोर विकिरण गर्न नेतृत्व।
अनुप्रयोग क्षेत्र। स्थानीय एक्स-रे, जुन दाँतहरू अध्ययन गर्न भइरहेको छ वा उदाहरणका लागि, नाकका स्पष्ट पाप आन्तरिक अंग र ऊँटहरूको विकिरण भन्दा बढी शरीरमा कम कम कम कम कम कम कम क्षति पुर्याउँछ।
एक्सपोजरको अवधि। रेले अध्ययन अन्तर्गत अध्ययन अन्तर्गत अध्ययन गर्ने क्षेत्रलाई प्रभाव पार्नु पर्छ। / LI> :
यस अंकमा अन्तिम निर्णय सँधै तपाईंको डाक्टरको लागि रहन्छ। विशेषज्ञको मूल्यांकन गर्नुहोस्। बिल्कुल हानिरहित एक्स-रे हुँदैन। विकिरणको खुराकले भ्रुणको विकृतिमूलक परिवर्तनहरू निम्त्याउन सक्छ। एक्स-रे दुश्मनको प्रभाव पनि स्वस्थ कोषहरूलाई मार्नेमा प्रकट हुन्छ जुन Innive किरणहरू पाउँछन्। विशेष लामो ट्यूब प्रयोग गर्दा यसलाई जोगिन सम्भव छ जुन दाँतमा पठाइएको छ र हानिकारक किरणहरूको फैलाउने कोण कम गर्दछ।
नमस्कार! यस्तो अवस्था शाब्दिक रूपमा शुरू भयो कि यो शाब्दिक रूपमा यो दोस्रोमा गर्भवती भएको थियो। पछि योजना बनाई, तर लगभग weeks हप्ताको लागि समय (अवधारणाको क्षणबाट)। 10 दिन अघि दाँतलाई उपचार गर्न दन्त चिकित्सकको रूपमा हिंडे। त्यसोभए मलाई गर्भावस्थाको बारेमा थाहा थिएन र मलाई एक्स-रे र एनेस्थेसिया बनाइएको थियो। अब म चिन्तित छु कि त्यहाँ कुनै परिणामहरू हुनेछैनन्। र तपाईंलाई अझै पनि चट्टान गर्न2दाँत चाहिन्छ - चोट पुर्याउँछ। त्यहाँ पहिले नै एक्स-रे बिना नै छ, तर एनेस्थेटिकको आवश्यकता छ। के गर्ने मलाई थाहा छैन, पहिलो गर्भावस्थामा त्यस्तो समस्या थिएन, त्यसैले म चिन्ता गर्छु।
गर्भावस्था - समय जब भावी आमाको दाँतहरू सबैभन्दा जोखिममा परेका छन् जब यो नियमित दन्त चिकित्सक भ्रमण गर्दछ र ध्यानपूर्वक स्वदेशी अनुगमन गर्दछ। प्राय: गर्भवती महिलाहरूले घाँसहरू, पल्प पोखरी उत्पादन गरे ...
आमा, मलाई भन्नुहोस्। के कसैले पनि प्रारम्भिक अवधिहरूमा एक्स-रे दाँत गर्न पर्छ? के यो सम्भव छ? हुनसक्छ कसैसँग अनुकूल नतिजाको अनुभव छ?
मैले गरे। खैर, हप्ताको शुरुको अवधि 1 14-16 थियो। सबै ठीकठाक छ र मसँग र बच्चाको साथ। त्यहाँ तिमी एप्रोन बन्द गर्नेछौ।